Vidim-piainana: Misoko mangina ny fidanganany
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Vidim-piainana: Misoko mangina ny fidanganany
Mitohy sy mihamafy ny fampihomboan’ny fitondram-panjakana ny fahasahiranam-bahoaka, noho ny tsy fahaizany mitantana.
Ny vidin’ny fotsim-bary eny an-tsena izao dia niakatra manodidina ny 50 ariary ny kapoaka iray. Ny sandan’ny herin’aratry ny Jirama koa dia niakatra ny faktiora tamin’ity volana ity. Raha ny marina dia faktiora manambara ny lanin’ny mpanjifa isan-tokantrano tamin’ny volana jona no tonga izao ary efa mihatra any ilay fiakaran’ny sandany, raha nambara fa ny volana jolay vao mihatra. Raha ny tokony ho izy ange izany dia ny faktioran’ny Jirama tonga any amin’ny mpanjifa amin’ny volana aogositra vao tokony hisehoan’ny fiakaran’io sara io e !
Na ireo akora roa iankinan’ny fiainam-bahoaka andavanandro ireo ihany aza (Jirama sy vary) dia efa ahafahana milaza hatrany fa « tsy mahomby mihitsy ny mpitondra ».
Marina fa nitondra fanazavana ny tompon’andraikitra na ny antony niakaran’ny saran’ny faktioran’ny Jirama na ny vidim-bary saingy fialana andraikitra ihany izany ho an’ny vahoaka. Raha mpitondra fanjakana tsy hitady vahaolana mba hanamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka aloha fa sanatria vao mainka hampidangana vidim-piainana sy hanamafy ny fahantran’ny ambanilanitra dia tsy misy antony sy fototra ijoroan’izany fitondrana izany.
Tsy ny fitanisana ny olana mitranga ka hanamarinan’ny mpitondra fanjakana tena noho ny fisehoan-javatra miantraika any amin’ny vahoaka no tarigetra raha tena mpitondra fanjakana tokoa ny mpitondra fanjakana fa ny fitadiavany vahaolana isa-minitra amin’ny tranga miseho mba hanamaivanana isanandro ny fahasahiranana mianjady amin’ny vahoaka, ary nahoana moa no hamaivanina fa tsy foanana mihitsy izany fahasahiranana izany ?